नेपाललाई एकीकृत गर्ने काम पृथ्वीनारायण शाहले नै गर्नु भएको होः डा. महत | Nagarik News - Nepal Republic Media
नेपाललाई एकीकृत गर्ने काम पृथ्वीनारायण शाहले नै गर्नु भएको होः डा. महत
२७ पुस २०७६ २ मिनेट पाठ
काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतले प्रशासनिक रुपमा एकीकृत गर्ने काम पृथ्वीनारायण शाहले गरेको बताएका छन्। आइतबार पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्तिको अवसरमा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै डाक्टर महतले यस्तो बताएका हुन।
उनले नेपाल र लोकतन्त्र एक अर्काको अभिन्न कुरा भएको भन्दै नेपाललाई विकशित बनाउन लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बलियो बनाउनु पर्ने तर्क गरे। सहमहामन्त्री महतले सरकार कुटनैतिक हिसाब असफल साबित भैसकेको पनि बताए। उनले सीमा अतिक्रमणतिर संकेत गर्दै भने ‘यो सरकार जहाँ संवाद गर्नुपर्ने हो त्यहा मौन बस्ने गरेको छ र जहाँ मौन बस्दा पनि हुन्छ त्यहा बोल्ने गरेको छ।
’कांग्रेस लोकतन्त्र,विधिको शासन र स्वतन्त्रताको लागि लडेको भन्दै अझैपनी यी कुराका लागि लडिरहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई मनलाग्दी गर्न र संविधानको उलंघन गर्न जनताले मतदान नगरेको भन्दै अहिलेको सरकार त्यतातिर अग्रसर भएको आरोप लगाए। उनले सरकारले संविधान मिच्ने स्वतन्त्रता खोस्ने काम गरिरहे नेपाली कांग्रेस र नेपाली जनताले त्यसको प्रतिकार गर्ने सरकारलाई चेतावनी दिए।
प्रकाशित: २७ पुस २०७६ १२:१० आइतबार
साझा पार्टीका प्रवक्ता डा. सूर्यराज आचार्यले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी सम्झौताका कतिपय बुँदा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र हित विपरीत रहेको जनाउँदै संशोधनविना संसदबाट पास गर्नु उपयुक्त नहुने बताएका छन्।
रौतहटका दुई नगरपालिकामा निषेधाज्ञा जारी
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले जिल्लाका दुई नगरपालिकामा निषेधाज्ञा जारी गर्दै दुवैलाई सिल गरेको छ। कोरोना संक्रमणले अत्यधिक प्रभावित तथा सबैभन्दा बढी संख्यामा क्वारेन्टाइनमा रहेका जिल्लाका ईशनाथ र राजपुर नगरपालिकालाई सिल गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले जानकारी दिए।
छुमचौरमा रोपियो मार्सीधान
संसारको सबैभन्दा उच्च स्थानमा धान फल्ने ठाउँका रुपमा परिचित छुमचौर जीउलोमा धान रोपिएको छ। छुमचौर जीउलोमा मार्सिधान रोपिएको हो।